Izitshudeni zikhathazekile ngokubhalwe kwezivivinyo kulandela umbhikisho eKapa | News24
Izitshudeni zikhathazekile ngokubhalwe kwezivivinyo kulandela umbhikisho eKapa
Cape Town - Kulindeleke ukuba zivele maduze enkantolo izitshudeni ezimbili zase-University of Cape Town (UCT) eziboshwe ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho ngodaba lwemali yokufunda ngoLwesithathi.
Lezi zitshudeni beziyingxenye yeqeqebane labafundi ebelihlanganyele ngaphandle kwasePhalamende ngesikhatyhi kuqhubeka inkulumo yesabelomali.
OLUNYE UDABA:Kuzophela ukudideka ngodaba lwemali yokufunda emanyevesi- Zuma
Lolu suku luqale ngenqwaba yezitshudeni zibhikisha ophikweni lwesikhungu semfundo ephakeme i-UCT zasuka lapho zalibangise kwesinye isikhungu semfundo ephakeme iCape Peninsula University of Technology (CPUT) ophikweni lwesikhungu oluseMowbray.
Lezi zitshudeni zifuna uMengameli uJacob Zuma aqinisekise ukuthi angeke inyuke imali yokufunda emanyuvesi futhi zifuna kukhishwe nombiko we-Commission of Inquiry into Higher Education and Training (Fees Commission).
Ezinye izitshudeni zikhathazekile ngokubhala izivivinyo zokuphela konyaka njengoba isimo sikanje.